ဟာသ Archives - Baganthar
ရေကျော်ပွဲဈေးတန်းမှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်
Bagan Thar Oct 16
ရေကျော်ပွဲဈေးတွင် ဘိုးတော် တစ်ပွေ ဗေဒင်ဟော နေတာကို ဘေးက လူငယ် အုပ်စု ၄,၅ယောက် က လှောင်သလိုလို ပြောင်သလို မျက်ခွက် ပြောင်နေကျသည်။ အဲ့ဒါ နဲ့ ဘိုးတော်လဲ ကြာလာတော့ ပေါက်လာပြီး “ဟေ့ရောင်တွေ မင်းတို့ ငါ့ကို ဘာထင်နေလဲ ..ငါကျိန်စာတိုက် အင်းခွက်ရေးလိုက်ရင် မင်းတို့ဘဝတွေ ဘာဖြစ် သွားမယ် ထင်လဲ” အဲ့ဒါကို လူငယ်အုပ်စု က မကြောက်တဲ့အပြင် ...
ခင်ဗျားတို့ အပိုင်းပေါ့ (ဟာသ)
တစ်ခါတုန်းက မောင်ဘနှင့်ညိုမြဆိုတဲ့ လက်ထပ်ပြီးကာစ ဇနီးမောင်နှံဟာ သူတို့နေတဲ့လာရှိုးမြိုကလေးကနေ မန္တလေးဘက်ကို ကားလေးမောင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဟန်းနီးမွန်းခရီးထွက်ခဲ့ကြသတဲ့… ဒီလိုနဲ့မှောင်လဲသွားရော…. မေမြို့မှာတင် ညအိပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသတဲ့…. တည်းခိုးခန်းသွားအိပ်တော့ တည်းခိုခကို တစ်ည ၃၀၀၀၀ ကျပ်နဲ့ သဘောတူလိုက်ကြသတဲ့.. မောင်ဘတို့လည်းပင်ပန်းလာကြတာဆိုတော့ စောစောအိပ်ယာဝင်လိုက်ကြသတဲ့… မိုးလင်းလို့ မန္တလေးဘက်ကို ခရီးဆက်မယ်ဆိုပြီး ကောင်တာမှာပိုက်ဆံသွားရှင်းတော့ ၁၂၀၀၀၀ တောင်းသတဲ့.. မောင်ဘတို့ကလည်း မပေးနိင်ဘူးဆိုတော့ မန်နေဂျာကို ခေါ်ရှင်းကြသတဲ့…. မန်နေဂျာက လည်း ဟုတ်တယ် .. ...
တပွဲစား စံမှဲ့ကြီးနှင့် မဟာမင်္ဂလာတာဝါတိုင်ဘွဲ့
Bagan Thar Oct 13
မဟာမင်္ဂလာတာဝါတိုင်ဘွဲ့ မဖဲဝါ၏ အကို ကိုစံမှဲ့ တော်တော်စိတ်လေသွားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ သူ မျှော်လင့်ထားသမျှ အခုတော့ ဒီလူတွေကြောင့် ခဲလေသမျှ သဲရေကျပြီ ။ ဟုတ်သည် ။ စဉ်းစားကြည့် ။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက သူ ဒီနေရာကို မျှော်လင့်ချက်အပြည့်နှင့် ရောက်လာခဲ့ဖူးသည် ။ သို့သော် သူ့ရည်မှန်းချက်မပြည့် ။ သူကလည်း သူ ။ ငယ်စဉ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက အင်းထဲတွင်ကြီးပြီး ငါးတွေဖမ်းသည် ။ သားစိမ်း ...
မြန်မာဘောလုံးအသင်း အကြောက်ဆုံးအရာ (ဟာသ)
အသံကြားရုံနဲ့ကို ကြောက်ကြတာ (ဟာသ) ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲအတွက်​ မြန်​မာ​ဘောလုံးအသင်းကို စခန်းသွင်း ​လေ့ကျင့်​​ပေး​နေပါတယ်​။ အချိန်​ကား ညဥ့် ၁၁ နာရီခန့်​ ရှိပြီဖြစ်​​သော်​လည်း မြန်​မာ​ဘောလုံးသင်း အိပ်​​ဆောင်​တစ်​ခုလုံး တစ်​​ယောက်​မှ မအိပ်​ကြ​သေးဘဲ၊ ဂစ်​တာတီးသူကတီး၊ ချက်​ထိုးသူကထိုး၊ စကားဝိုင်းဖွဲ့သူကဖွဲ့၊ ဖုန်း​ပြောသူက​ပြောနဲ့ အ​တော်​ကြီးကို ဆူညံလို့ ​နေပါတယ်​။ သည်းမခံနိုင်​တဲ့အဆုံး အသင်း​ခေါင်း​ဆောင်​က သူ့အသင်းသား​တွေကို ထ​ငေါက်​တယ်​…”ဟိတ်​​ကောင်​​တွေ မနက်​အ​စောထပြီး ​လေ့ကျင့်​​ရေး ဆင်းရမှာ၊ ပါးစပ်​​ပေါက်​​တွေပိတ်​ပြီး ခု အိပ်​ကြ​တော့” ဘယ်​သူမှ​တောင်​ ...
ခုနှစ်ဆယ်ကျော် အချစ် (ဟာသ)
Bagan Thar Oct 10
ခုနှစ်ဆယ်ကျော် အချစ် (ဟာသ) အဘဘုန်းကျော်သည်ကား မုဆိုးဖို အငြိမ်းစား အရာရှိ ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အသက်က ၇၀ ကျော် မျှ ရှိပြီ။ နောက်အိမ်ထောင်မရှိဘဲ တစ်ကိုယ်တည်း နေခဲ့သည် မှာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ အဖွား မတင်ရွှေ သည် လည်း မုဆိုးမ အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ်ဖြစ်သည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် အရပ်ထဲမှ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ကြီးမှူးကျင်းပပေးသော အဖိုးအဖွား တိုအား နေ့လည်စာ ကျွေးမွေးပွဲ ...
” ကျော်စံကေး နှင့် ရုက္ခဇီး” ရမည်းသင်း ရဲသင်တန်းကျောင်း၌ဖြစ်သည်။ နာမည်ပြော ကျော်စံအေးပါ။ အဘအမည် ဦးသမိန်ကြီးကျော်စံ ဟေ..အမေနာမည်ကရော..ဒေါ်ခတ္တာသောင်းညွန့်ပါ…ဘာကွ..မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား…? …မဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖိုင်မှာ.. မှတ်ပုံတင်၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံနဲ့တကွ တင်ပြထားပါတယ်။ ရဲကြပ်ကြီး သန်းဝင်းလဲ စိတ်ရှုတ်သွားပြီး ကျော်စံအေးရဲ့ဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။ အလို..လီဆယ်ပြီးပြောနေခြင်းတော့မဟုတ်….အားလုံး အမှန်တွေချည်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဖိုင်တွဲကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပြီး ကျော်စံအေးဆိုတဲ့ ရဲသင်တန်းသားသစ် အမျိုးကောင်းသားကို သေသေချာချာ မော့ကြည့်လိုက်သည်။ “ဟာ….အမလေး..” ..ဟမ်…ဘာလို့လဲဆရာကြီး…ဘာ..ဘာ…ဘာမဖြစ်ဘူး….ဟူးး…ကံကောင်းလို့ လိပ်ပြာမလွင့်တယ်…..ဗျာ….ဆရာကြီးသန်းဝင်းဟာ မှိတ်ထားသေမျက်စိကို ဖြေးဖြေးချင်းပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီး..မင်း… မင်းနဲ့ ...
ရိုးအလွန်းတဲ့ ကိုရိုး တယောက် ယောက္ခမကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ… (ဟာသ)
Bagan Thar Oct 08
ရိုးအလွန်းတဲ့ ကိုရိုး တယောက် ယောက္ခမကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ… (ဟာသ) ”ကိုရိုး ”နှင့် ” မယ်ခ ”တို့ အိမ်ထောင်ကျသွားကြသည်။ ” ကိုရိုး ”က ဒီဘက်ရွာ ” မယ်ခ”ကဟိုဘက်ရွာ တစ်ယောက်တစ်ရွာဆီကဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်ကျတော့”ကိုရိုး”ရွာတွင်”မယ်ခ” လိုက်နေသည်။ တစ်နေ့ ”မယ်ခ”ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် သတင်းမေးရန် ဟိုဘက်ရွာမှ” မယ်ခ” ၏ ဖခင်လာမည်။ ခက်တာက”ကိုရိုး”၏ အဖေသည်”မယ်ခ” ဖခင်ဖြစ်သူအား အကြွေးပေးစရာ ရှိလေသည်။ ထို့ ကြောင့်”မယ်ခ”အဖေလာလျှင် ...
“အရှင်ဘုရားတို့ တရားဟောတာ ဘက်မလိုက် ပါနဲ့”
” အရှင်ဘုရားတို့ တရားဟောတာ ဘက်မလိုက် ပါနဲ့ ” တစ်နေ့သ၌ ကျောင်းဒကာမ အပျိုကြီး မတင်ရွှေသည် ဦးသာကျောင်းသို့ ဆွမ်းပို့ လာ၏ ။ တစ်ရွာထဲ လည်းဖြစ် ဆွေမျိုးနီးစပ်လည်း တော်သဖြင့် ဦးသာတို့ ကျောင်းသို့ အရောက် အပေါက် များသလို ရင်နီးမှုလည်း ရှိလေသည်။ မတင်ရွှေ ဆွမ်းကပ်ပြီးနောက် ဦးသာအား လျှောက်လေ၏ ။ ” ဦးဇင်းတို့က တရားဟောတာ ဘက်လိုက်တယ် ” ...
ယောက္ခမ ချစ်တဲ့ သားမက်ဆိုတာ….. (ဟာသ)
ထီပေါက်လို့ လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာ ကမ္ဘာပတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိန်းမရဲ့အမေက သူပါ လိုက်မယ်ဆိုပြီး ပါလာတယ်။ ယောက်ျားလုပ်သူက မခေါ်ချင်ပေမဲ့ မိန်းမကို လွန်ဆန်မရတာ့ ခေါ်ခဲ့ရတယ်။ ယောက္ခမကြီးက အင်မတန် ဇီဇာကြောင်ပြီး သူများအပြစ် တအားပြောတယ်။ ရောက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ အပြစ်တွေ လိုက်ပြောတယ်။ အစားအသောက် မကောင်းဘူး။ ရာသီဥတုမသာယာဘူး။ လူတွေက ရိုင်းတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရောက်တော့ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်ကို သွားဝေဖန်မိတော့ ကြားတဲ့လူတွေက ရဲသွားတိုင်တယ်။ ဒါနဲ့ ...
ဘုန်းဘုန်း မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အရာ (ဟာသ)
ဘုန်းကြီးနဲ့ကြက်ဥ “ဘုန်းဘုန်းဘုရား” “ဟေ..ဘာတုန်း ဒကာမရဲ့ ဆွမ်းစားလာပင့်တာလား” “ဘယ်ကလား ဆွမ်းစားလာပင့်ရမလဲဘုရား ဘုန်းကြီးတပည့်ကျောင်းသားတွေလေ” “အေး ငါ့ကျောင်းသားတွေဘာဖြစ်တုန်း” “ဘာဖြစ်ရမလဲဘုရား တပည့်တော်ခြံထဲက ကြက်တွေဥခိုးသွားတယ်လေဘုရား” “ဟာ ဒီကောင်တွေလုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ဘယ်နှစ်လုံးတောင်ခိုးသွားလဲ” “ငါးလုံးရှ်ိတာ အကုန်ခိုးသွားတယ်ဘုရား” “ဒီကောင်တွေတော့ကွာ သံချောင်းတို့သာဂိတို့ လာခဲ့ကြစမ်း” သံချောင်းတို့ရောက်လာချိန်မှာ “မင်းတို့ သူ့အိမ်ကကြက်ဥတွေခိုးသွားတယ်ဆို အဲဒါလာပြန်တောင်းနေတယ်။ ပြောစမ်းမင်းတို့ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲ” “တပည့်တော်နဲ့သာဂိ တစ်လုံးစီပြုတ်စားပြီး ကျန်တဲ့သုံးလုံးလည်း အခြားတစ်ယောက်စားလို့ ကုန်သွားပြီဘုရား” မင်းတို့ကောင်တွေ သူများပစ္စည်းမခိုးရဘူးလို့ ငါဆုံးမ မထားဘူးလားဟင် ...